खाली पीलीः के यसले बजारमा धमाका जमाउला ? | News Polar
खाली पीलीः के यसले बजारमा धमाका जमाउला ?
कलाकारः इसान खट्टर, अनन्या पांडे, जयदीप अहलावत, स्वानंद किरकिरे, जाकिर हुसैन, सतीश कौशिक
निर्देशकः मकबुल खान
अवधिः १ घण्टा ५९ मिनेट
बलिउडमा कुनै जमान थियो हिन्दी फिल्महरु दुई तीन वटा कथा हेरफेर गरेर मसला हालेर नयाँ फिल्म बनाइन्थ्यो । यी फिल्ममा केही कमेडी (हस्यौली), केही फाइट र केही वकील देखिन्थे । वकीलले कडा सजायको माग गरेका दृश्य आमरुपमा हुन्थ्यो । यस्ता मसाले फिल्मले बक्स अफिसमा निकै कमाई गर्थे, र त्यसैलाई सफल मानिन्थे । निर्देशक मकबुल खानले निर्देशन गरेको नयाँ फिल्म “खाली पीली” मा यिनै मसला फर्मुला प्रयोग गरेका छन् ।
कथाः एक रात विजय चौहान उर्फ ब्लाकी (इसान खट्टर) को ट्याक्सीमा अचानक एक सुन्दरी किशोरी (पूजा) आउँछिन् जसका पछिपछि केही गुन्डाहरु आएका हुन्छन् । पूजा आफ्नो बिहेबाट एउटा ब्याग लिएर भागेकी हुन्छिन् जसमा धेरै नगद र गरगहना हुन्छन् । यसपछि ट्याक्सी ड्राइभरसँग पूजाको नयाँ कथा शुरु हुन्छ । यो जीवनयात्रामा दुबैको रोमांस, एक्सन समेतका अनेक बम्बैया मसला फिल्ममा देख्न सकिन्छ ।
समीक्षाः फिल्ममा ब्लाकीका रुपमा चिनिएका इसान खट्टरको भूमिका र स्वरुप सन् १९८० र ९० को दशकका रजनीकान्त र अमिताभ बच्चनकै जस्तो देखिन्छ । फिल्ममा पहिलो दृश्यदेखि नै अघिल्लो दृश्य र कथा के आउला भन्ने दर्शकले अनुमान लगाउन सक्छन् । फिल्ममा धेरै गोलीबारी भए पनि हिरो इसानलाई भने गोली लाग्दैन । फिल्ममा मकबुलले बलिउडका मसला संवादको भरपुर प्रयोग गरेका छन् । फिल्ममा इसान र अनन्याबीचको सम्बन्धका बारेमा दर्शकले जेजस्तो अपेक्षा गरेका हुन्छन् त्यो पाउँदैनन् । फिल्ममा एउटा चुम्बन (किस) को दृश्य पनि राखिएको छ जुन निकै अजीब लाग्दछ ।
फिल्मको कथा बीच बीचमा फ्लासब्याकमा जान्छ र यसले फिल्मको गतिमा ब्रेक लगाउँछ । फिल्मका गीतमा इसानले नृत्यको सीप देखाएका छन् र दर्शकलाइ शाहिद कपुरका पुराना दिनको याद दिलाउँछन् । अनन्या निकै ग्लामरस देखिन्छिन् ।
यद्यपी फिल्ममा इन्स्पेक्टर तावडे र भीमको रुपमा जाकिर हुसैन र सतीश कौशिकले निकै मनोरञ्जन दिने प्रयास गरेका छन् । युसुफ चिकना (जयदीप अहलावत) ले फिल्ममा खलनायकको भूमिका निर्वाह गरेका छन् र उनको भूमिका निकै सुदृढ छ ।
फिल्ममा तीन वटा गीत छन् र यी गीतमा संगीत विशाल–शेखरले राम्रै गरेका छन् ।
किन हेर्नेः यदि तपाइँ बम्बैया मसला फिल्म हेर्न चाहनु हुन्छ भने यो फिल्म हेर्न रमाइलै हुनेछ ।
(स्रोतः टाइम्स अफ इन्डिया)
# हिन्दी फिल्म
प्रकाशित : आश्विन २१, २०७७, ९:४६:५१